Star Wars: The Bad Batch (2021) – Gold Channel Movies
အပိုင်းပေါင်း ၁၃၃ ပိုင်းနဲ့ ၁၂ နှစ်ကြာအောင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Star Wars: The Clone Wars အပြီးမှာတော့ Star Wars ပရိသတ်တွေအတွက် Star Wars: The Bad Batch ဆိုတဲ့ Series သစ်လေးနဲ့ ပရိသတ်ရှေ့ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။
Star Wars: The Bad Batch ဟာဆိုရင် Star Wars: The Clone Wars ရဲ့ Sequel ဖြစ်ပြီးတော့ Clone Wars အပြီးမှာပဲ ဇာတ်အိမ်တည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Clone Force 99 လို့ နာမည်ရတဲ့ The Bad Batch အဖွဲ့ဟာ Clone Wars ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ Order 66 ကို လက်ခံရရှိပြီးတော့ Jedi တွေကို သတ်ဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ Crosshair ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ The Bad Batch အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ Order 66 ကို မထမ်းဆောင်ချင်ကြပါဘူး။ အဲ့ဒီကနေမှာ Crosshair တစ်ယောက် The Bad Batch အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ဘယ်လိုပြသနာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုအပိုင်း ၁ မှာ တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်ကောင်တွေကတော့ Star Wars: The Clone Wars မှာ ပြသပြီးသားဇာတ်ကောင်တွေဖြစ်ပြီးတော့ အသစ်အနေနဲ့ဆိုရင် The Bad Batch အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ Omega လေးတစ်ယောက်ပဲရှိပါမယ်။ အပိုင်းကတော့ လက်ရှိ Season 1 မှာ 16 ပိုင်းရှိပြီးတော့ တစ်ပတ်ကိုတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ ထွက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Star Wars: The Clone Wars တုန်းကလိုမျိုး နာရီဝက်မဟုတ်တော့ပဲ တစ်ပိုင်းကို တစ်နာရီကျော်ကျော်ဆိုတော့ အာသာပြေမှာကတော့ သေချာပါတယ်။ ဆိုတော့ Star Wars ပရိသတ်တွေ Star Wars: The Clone Wars ကို တောက်လျှောက်ကြည့်လာတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် လက်လွှတ်ခံလို့မရတဲ့ ဒီ Animation Series လေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
Quality – Web-Rip
Size – 600MB / 260MB
Genres – Animation, Action, Adventure
Run Time – 60 Mins per Episode
Android Box Link – https://mega.nz/file/8thXhKRD#AhO0cQofAXN0eaq1iCqT4q7LPQWuMNTIsBMif3-sIOM
TMDb Rating 9.1 63 votes
ttSeptember 26, 2021Reply
Star wars Rebels and clone war plz
mg mg thanJuly 16, 2021Reply
Kaung HtetJuly 8, 2021Reply
Gc အမြဲ series မပြီတေဘူး link တွေ ကတေနေပြီ zကာတွေလည် တစ်ပတ်မခြဘူာ link တွေကပျက်နေpဒီ mega & mediafire လွဲပြီ မရှိတော့ဘူးလား ပြောတာလည်အမြဲအာပေါက်နေp separation ဆိုရင်စတင်ထဲကဆွဲမရတာ အခုထိမပြင်ပေတေဘူး cm နဲ့အဲ့ဒါတွေကွာတယ်
use user drive link
Naung SoeJune 27, 2021Reply
ep5link repair plz
DYNyiJune 24, 2021Reply
All links from Ep-05 are dead bro. Can you please check?
kukuJune 11, 2021Reply
မျော်နေတယ်နော် မင်မင်တို့ချစ်ချစ်တို့ရေ တန်းလန်းကြီးမထားကြပါနဲ့
Ye Htut KhaungMay 11, 2021Reply
HtetMay 7, 2021Reply
Me too. Clone war ကြည်ချင်ပါတယ်။
OLINMay 7, 2021Reply
Star war clone war တင်လို့ရရင်တင်​ပေးပါအုန်း ​နော်မကြည့်ရ​သေးလို့admin kyi yat